समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. भट्टराई र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा यादव – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
वैकल्पिक पार्टीका रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं, २४ वैशाख २०७६ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता घोषणा भएपछि त्यसलाई वैकल्पिक पार्टीका रुपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौंमा सोमबार दुई पार्टीबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टीको घोषणा भएको हो । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईबीच लामो समयदेखि एकीकरणका लागि गृहकार्य हँुदै आएको थियो । संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. भट्टराई र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा यादव रहने घोषणा गरिएको छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहनेछन् । २५ सदस्यीय पदाधिकारीको घोषणा गरिएको छ ।
पदाधिकारीमा दुई अध्यक्ष, एक सहअध्यक्ष, एक वरिष्ठ नेता, आठ उपाध्ययक्ष, तीन महासचिव, तीन उपमहासचिव, चार सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष रहेका छन् । दुई अध्यक्षमा भट्टराई र यादव रहेका छन् । वरिष्ठ नेतामा अशोककुमार राई र सहअध्यक्षमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यस्तै, उपाध्यक्षहरू नवराज सुवेदी, परशुराम खापुङ, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, हिसिला यमी, लालबाबु राउत र हेमराज राई, महासचिवहरूमा रामसहाय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ र रणध्वज कन्दङ्वा रहेका छन् ।
यसैगरी, उपमहासचिवमा डम्बर खतिवडा, दानबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश अधिकारी छन् भने सचिवहरूमा मोहम्मद इस्तियाक राई, दुर्गा सोब, परशुराम बस्नेत र प्रशान्त सिंह छन् । कोषाध्यक्षमा विजयकुमार यादव रहेका छन् । दुई पदाधिकारी पछि चयन गरिनेछ ।
पार्टीको केन्द्र्रीय कमिटी ४३० सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा फोरमबाट २ सय ८० र नयाँ शक्तिबाट १ सय ५० जना सदस्य हुने सहमति भएको छ । ‘समाजवादी पार्टी, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषण अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ दुई पार्टी एकीकरण हुनुअघि भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत पार्टीले फोरमकै झन्डालाई निरन्तरता दिएको छ । चुनाव चिन्ह मंगलबार ९आज० बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । २६ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा एकीकृत पार्टीको दल दर्ताका लागि निवेदन दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकीकरण सहमति भएपछि फोरम नेपालको महाधिवेशन स्थगित भएको छ । २८, २९ र ३० वैशाख जनकपुरधाममा गर्ने भनिएको फोरम नेपालको महाधिवेशन स्थगित भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशन ७, ८ र ९ असोजमा जनकपुरमा गरिने
स्वतन्त्र पत्रकार महासंघ कास्कीमा गौतम चयन